Iindaba -YIWU, China, Meyi 12, 2020 / PRNewswire / - Ngomhla we-10 kuMeyi 2020, umsitho okwi-intanethi owenziwa ngo-2020 Usuku lweBrand China waqalwa.
I-YIWU, China, Meyi 12, 2020 / PRNewswire / - Ngomhla we-10 kuMeyi 2020, umsitho okwi-intanethi u-2020 uSuku lweBrand China wakhatywa. Njengomsitho obalulekileyo wokuphawula uphawu rhoqo ngonyaka kwintengiso ye-Yiwu, uKhuphiswano lweYiwugo oluPhezulu lwabathengisi nalo luqalise ngokusesikweni inkqubo yokuvota.
Olu khuphiswano, olugcinwe ngempumelelo kunyaka wesibhozo ngokulandelelana, lubonise inani lezinto zorhwebo ezithunyelwa kumazwe angaphandle, ezinje ngeHailing GEMEI Small Home Appliance Firm, Nicole Fashion jewelry, Zongxin Canvas Shoes, and BAOLA, njl. Abathengisi basungula ulwazi lwegama kwaye babonakalise amandla abo ebrendi, uYiwugo wenze uhlengahlengiso kwinkqubo yamabhaso. Ngelixa uqhubeka nokukhetha "abathengisi abaphezulu abali-10", olu khuphiswano luzakubonisa abali-10 "Abathengisi abahamba phambili", ama-80 "abaThengisi beModeli" kunye ne-120 "ye-Elite Vendors". Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba, ngokufika kwe "Live Streaming Era for All", ibhaso le "Top 10 Influencers" longeziwe kwinkqubo yamabhaso okhuphiswano lwalo nyaka, ngenjongo yokwenza abathengisi bakwazi ukubonisa imifanekiso yabo kunye ii-brand ngokusasaza ngqo, ngaloo ndlela kutsala umdla wabathengi kwihlabathi liphela ngendlela ecace ngakumbi. Inkqubo yokuvota izakuqala nge-10 kaMeyi ka-2020 kude kube nge-31 kaDisemba ngo-2020. Iziphumo ziya kubhengezwa emva komhla kaJanuwari 1, 2021.